I-Chalet ekhethekileyo eDachstein-West - I-Airbnb
I-Chalet ekhethekileyo eDachstein-West
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguAnna
Isisa kunye nengqwalasela enkulu kwiinkcukacha ezine-chalet isasazwe ngaphezulu kwemigangatho emi-3 kwaye inokwamkela ukuya kuthi ga kwi-9 abantu. Onke amagumbi okulala axhotyiswe ngemigangatho yeeplanga kunye neengcango, iibhedi ezisemgangathweni, amagunjana amakhulu, kwaye amanye anomabonakude/iDVD. Imigangatho esepasejini kunye nezinyuko zikwitileyile zamatye ezinezifudumezi zomgangatho ophantsi. Imigangatho kumagumbi okulala kunye negumbi lokuhlala lihonjiswe nge-larch. Onke amagumbi okuhlambela aneshawari kwaye enye inebhafu eyongezelelweyo. Ukongeza, kukho i-gu eyahlukileyo
Amagumbi okulala ama-4, abantu abayi-9
Igumbi lokulala 1 - 1 King 180x200
Igumbi lokulala 2 - 1 King 180x200
Igumbi lokulala 3 - 1 Ibhedi ephindwe kabini 160x200 kunye nebhedi eyibhedi eyi-1 110x200
Igumbi lokulala legalari-1 Ibhedi ephindwe kabini 160x200 kunye nesofa enye yokulala 140x200
Izindlu zokuhlambela ezi-2 kunye ne-1 yangasese eyongezelelweyo
Igumbi lokuhlambela 1 - ibhafu, ishawari kumgangatho ophantsi
Igumbi lokuhlambela 2 - Indlu yangasese kunye neshawari kwindawo yokuqala ephezulu
WC kumgangatho ophantsi
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinesitovu sombane, ifriji, isikhenkcisi, imicrowave, i-oveni, umatshini weespresso kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Indawo yokuhlala kunye neyokutyela ene-180 ° indawo yomlilo yepanoramic, itafile enkulu yokutyela eyenziwe nge-oki yasendle yabantu abayi-10 phambi kwe-15m² yefestile yepanoramic.
Iloft ekhululekileyo yokudlala nokufunda
Igadi enkulu enepatio kunye nebalcony ejikelezileyo ejikeleze indlu
ITV, iBluRay DVD kunye ne-5.1 Dolby Surround kwindawo yokuhlala, iTV kunye neDVD kumagumbi okulala amabini
Eyahlukileyo i-pantry / igumbi elisetyenziswayo elinomatshini wokuhlamba kunye nebhodi yoku-ayina
Ikhapoti yeemoto ezi-2
Iiholide zasebusika kwingingqi ye-ski Dachstein-West:
I-Annaberg e-Dachstein-West e-Salzburg ineekhilomitha ezili-142 zamathambeka njengengcebiso kusapho lweholide yokutyibiliza ekhephini. Ummandla ufanelekile kwiindlela zayo ezininzi ezibomvu ezilula kakhulu, ngokukodwa kubaqalayo kunye neentsapho. Ezo zimi kakuhle kakhulu kule ndawo yokuchithela iiholide ngenxa yenkathalo ebalaseleyo yabantwana. Indawo ye-ski inokufikelelwa kumazantsi eJamani ngokukhawuleza kwaye ngoko ifanelekile kwabo bangafuni ukuqhuba ngokungapheliyo. I-snowboarders enkosi kwenye yezona paki zibalaseleyo zomhlaba ngokuqinisekileyo ziya kufumana oko zikufunayo. Kwindawo yokutyibiliza ekhephini ezinye izinyusi zezitulo kunye neetrektara zitshintshwa zizinyusi ze-ultramodern Gondolas phambi kwesizini ka-2013/2014. Eyona nto iphawuleka ngakumbi ngamathambeka ekhephu endalo i-Törleck kwaye ayiqengqelekiyo nge-Skiraupen ibaleka emnyama kwiingcali.
Lilonke, indawo ye-ski ngokukhethekileyo kwiintsapho idilesi ephezulu. Ke ngoko kolu didi iSkigebiete-Test inike amanqaku apheleleyo. Ukutyibilika kweentsuku ezi-1,5 kukwasebenza kwezinye iindawo ezintandathu ekulula ukufikelela kuzo e-Skiverbund Dachstein West. Kwaye iSportwelt amadé nayo ayikude.
Ukusuka kwii-chalets uqala ngokuthe ngqo kwindawo yokukhwela intaba eneendlela ezininzi eziphawulweyo kuwo onke amanqanaba. Umgcini wendlu wethu ukuthatha ngesicelo sokukhenketha okukhokelwayo kwaye akukhokelela kwezona ndawo zibalaseleyo, okanye ujonge intaba ngokwakho. Kukho neendlela zokuhamba ebusika.
Kubantwana abacetyiswa ngakumbi ziindlela ezininzi apho izifundo zelizwe lezityalo zemveli kunye nokunye okuninzi okuchazwayo.
Iindlela ezidumileyo yi-Almentour okanye i-Dachstein-round. Ungaphinda ujikeleze intaba yeDachstein. Iindlela zebhayisekile yasezintabeni eTennengau zibonelela ngocelomngeni lwezemidlalo kubo bonke ubunzima. Ukuya kumakhulu eekhilomitha zothungelwano oluphawulwe kakuhle lwemizila yeebhayisekile zeentaba iyanaba.
Sinokufikelelwa ngomnxeba nangaliphi na ixesha kwiindwendwe zethu. Inenekazi lethu lendlu lihlala kwimizuzu nje kude nendlu kwaye liluncedo kakhulu ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Annaberg,A-